Nkọcha nke alụmdi na nwunye: "Nrọ nile nke ndị inyom nile bụ alụmdi na nwunye" Ọ bụrụ na ndị Ebe Ọdịda Anyanwụ gwara anyị ka anyị yi uwe "Red" ma ọ bụ "Black" maka agbamakwụkwọ anyị kama uwe ejiji, nabata? Ee ma ọ bụ Mba na kedu?
Site na: KongoLisolona: July 13, 2019 00: 40 Enweghị asịsa
Na, gịnị ka agba ọcha a pụtara n'uwe agbamakwụkwọ? N'ikpeazụ, olee otú ndị nna nna anyị si eji ejiji n'oge ha lụrụ? Mgbe ndị ọcha nọ na-ekpuchi Chineke, ndị bi n'Ebe Ọdịda Anyanwụ bibiri alụmdi na nwunye ahụ. Nlehie ole ọ hụrụ?
Ọ ga - abụ ihe arụ maka nwa nwanyị na - alụ ọhụrụ ka o yikwasị uwe ọzọ karịa ọcha. Ọ ka bụ ịkpa ókè dị egwu. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị dị adị n'ezie Congo / Congoonye ka na-echeta nwaanyị a? Kedu aha ya?